Ertiraa: Abbootiin irree lachuu mataa isaanii malee ummatoota dhiitanii bulchaa jiran bakka hin bu´ani – Kichuu
HomeAfaan OromooTVErtiraa: Abbootiin irree lachuu mataa isaanii malee ummatoota dhiitanii bulchaa jiran bakka hin bu´ani
“Abbootiin irree lachuu mataa isaanii malee ummatoota dhiitanii bulchaa jiran bakka hin bu´ani”
jedha sagantaan warra Ertiraa kun.
Itoophiyaan gaaffii Nafxanyootaa simattee keessumsiiftee gaaffii Oromoo ukkaamsitu Oromiyaa keessaa dhiitamtee bahuu qabdi. Gaafiin Nafxanyootaa Jawar hiisisuu, ABO ukkaamsuu fi OMN cufsiisuu dha. Kun hunduu simatameefii deebii argateera. Gaaffiin mirga ofiin of bulchuu fi walqixxummaa Oromoon kaasu ammoo ukkaamfameera. Itoophiyaan akkasii Oromoo waliin dugdaa fi garaa dha. Oromoon dhiiga Oromummaa himachaa haqa saba kanaa ganee diina waliin nurratti duulus gama keenya miti. Oromiyaan wareegama ilmaan ishiitiin of kabajsiisuuf qabsoon finiinee itti fufa!
Oromoon isa dubbatee garaa nama gahus hayyuu akkanaa ni qaba
Obboo Darajjee Baqqalaa
“Nuti hoggantootni paartii kan jiraanu yoo biitti jiraattedha. Biitti kuni yeroo ammaa dhukkubsattee jirti. Dhukkubsachuu qofa osoo hin taane heddu dhukkubsattee jirti. Kanaaf biyya tana akkamiin balaa kanarraa hambisna?
nuti nama Afaan dhadhaa garaan cuubee nama keenya jennee masaraa mootummaa keenyee jirra. Namni Afaan dhadhaa kuni cuubeen osoo hin taane matrayyessiidhan nu fixuuf qophaa’ee jira. Kana qofaa miti nama harma haadha Oromoo muraa ture lafee isaa lafaa guuree masaraa mootummaatti siidaa isaa ijaaraa jira.
Namoonni meeqa osoo jiranuu naggaadotaa fi daaqonoota lafee walitti qabuuf masaraatti waamaman waliin Oromoo fi saboota biroo irratti duula hamaa gaggeessaa jiru.
Nuti Pp jedhamee eenyu jedhamee dhaaba eenyummaa saba kanaa balleessuf Afaan saba kanaa balleessuf duudhaa fi safuu Oromoo balleessuf nama fiigu kana dura dhaabachuf yeroo as dhufnutti dhiibbaa heddutu nurra gahe.
Nuti roorroo kamiifuu hin jilbeeffannu. Biyya Tana balaa hamaa kanarraa hambisuu qofa kaayyoon keenya. pirooppaagaandaa sobaa TV dhan afarfamu dhiisuu qabna.Waan isin ajaa’ibu torbee darbe Adaamaan ture. Galma abbaa Gadaa keessatti takkaa ta’ee kan hin beekne wal gahiin bilxiginnaa Afaan Amaariffaa qofaan gaggeeffamaa ture. kan gaggeessaa tures Abiyyi. Qaamni mootummaa ofiin jedhee masaraa mootummaa jiru kuni dhaaba eenyummaa sabaa balleessuf deemudha guutumaan guututti.
Waltajiirratti kan dubbatanirraa